I-Posky Boeing i-777-200 emhlophe, ayikho iilveries, akukho nto
umbuzo I-Posky Boeing i-777-200 emhlophe, ayikho iilveries, akukho nto
iinyanga 11 4 iintsuku ezidlulileyo #884 by jangor
Hayi, ndikhuphe i-Posky B777-200 esuka kwiRioo kwaye ndiyikhuphela kunye nefuthe lokulinganisa ukubuyisela ithuluzi. Ndizifake zombini kwaye ndinazo iindiza ezine ezihleli kwipolani yam moya. Nangona kunjalo, xa ndivula, ziba mhlophe, azikho iilveries, ayikho into, ayikho nkcukacha, ayikho i-cockpit, akukho nto. Igobolondo elimhlophe.
Ndiyilandile kwaye ndafaka ezinye i-B777 ezininzi ukusuka kwiRioo nakwezinye iiwebhusayithi zamahhala, kodwa zihlala zifana. Ndiphantse ndixelele ukuba iFSX yam idibene neB777. Okufanayo, ngendlela, kwenzeka kwiDe Haviland Dash 8-400. Ndiyathumela umfanekiso weskrini esimhlophe.
Ndingayisombulula njani le nto njengoko ifika kum amathambo.
iinyanga 10 2 kwiiveki ezidlulileyo #910 by Parky-Joe
Yiya kwiisethingi uze wenze ngokwezifiso uze unyule ibhokisi 'yeXesha yeXesha yeXesha yeXXXX' kwaye zonke iilveries zifanele zibe khona. Ngaba le nto ndeyayo kwaye ndayifumana indlela yokuyicombulula ngayo iiveki zetyala kunye nephutha. Ithemba lisebenza kuwe.
Ixesha ukwenza page: 0.131 imizuzwana